nzungu fekitori - China nzungu Vagadziri, Vatengesi
Yakazara Threaded Matanda
flange nzungu ndiyo imwe yenzvimbo dzinozivikanwa nzungu dziripo uye dzinoshandiswa nema anchor, mabhaudhi, screws, zviwitsi, shinda dzakapetwa uye pane chero chimwe chinosunga chine muchina sikuruu shinda. Flange zvinoreva kuti vane flange pasi.
Metric Lock Nuts ese ane chinhu chinogadzira isiri-yechigarire "kukiya" chiito. Kukunda Torque Lock Nuts inovimba neshinda deformation uye inofanirwa kumisikidzwa uye kubviswa; iwo haasi emakemikari uye tembiricha yakatemwa seNylon Insert Lock Nuts asi kushandisazve kuchiri kushoma.
Hex nzungu ndeimwe yenzungu dzinowanikwa uye dzinoshandiswa nemaanchor, mabhaudhi, screws, zviwiti, tsvimbo dzakasungwa uye pane chero chimwe chinosunga chine machina sikuruu tambo. Hex ipfupi nehexagon, zvinoreva kuti vane mativi matanhatu
Din6921 Flange Nuts, Dema Kuputira Hex Bolts, Nhema Oxidation Hex Bolts, Yakakwira Simba Hex Bolts, Hexagon Socket Musoro Bolts, Bolts,